आफ्नो हात मर्मत: कसरी टाइल मा seams अधिलेखन गर्न?
यस लेखमा हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी टाइल seams अधिलेखन गर्न। पहिलो नजर मा, यो राम्रो सरल काम देखिन्छ। तर यो त छ। तपाईं एकदमै होसियार छन्। अन्यथा, तपाईं उचित स्तरमा छैन यो भने परिणाम पनि सबै भन्दा उत्तम बिगार्न सक्छ सेरेमिक टाइल्स को स्थापना वा सजावटी पत्थर। टाइलहरू बीच seams जाम गर्न बाटो, यो दुई उद्देश्य भेद गर्न आवश्यक छ। पहिलो - सौंदर्य गुण खत्म तनाव - यो प्रभावकारी असिद्धता वा काम सामाग्री, दोस्रो लुकाउनुहोस्।
वर्तमान समयमा, त्यहाँ विशेष उपकरण धेरै हुँदा, यो सजिलो कसरी टाइल मा seams अधिलेखन गर्न को प्रश्नको जवाफ छ। संरचना, यी दुई समूह विभाजित छन्:
सिमेन्ट आधारमा मिश्रण
को epoxy राल लागि आधारको रूपमा सेवा जो Grouts।
जब मिश्रण चयन धेरै महत्त्वपूर्ण छ अन्य सिलिकन आधारित उदाहरणका लागि, सील लागि अभिप्रेरित विशेष पदार्थ संग trowelling सामाग्री भ्रममा छैन। यस्तो साधन सिफारिस छैनन्: यो आकर्षक सौंदर्य गुण छैन र प्राविधिक संकेतक लागि उपयुक्त छ।
सिमेन्ट आधारित grout त्यसपछि सादा पानी वा पतला छ जो सुक्खा पाउडर, छ तरल लेटेक्स। DIY पसलहरुमा तयार प्रयोग-गर्न-grout बेच्न, तर मूल्य को "अर्ध-समाप्त" मा भन्दा धेरै उच्च छ। भौतिक यस प्रकारको थप थपियो घटक आधारमा धेरै अन्य उपप्रकारों विभाजन गरिएको छ।
आधारित jointing सामाग्री epoxy रेजिन को eponymous सामाग्री पनि विशेष hardeners साथै बनेको छन्। उपकरण यांत्रिक क्षति गर्न, साथै विभिन्न रासायनिक पदार्थ को प्रभाव प्रतिरोध बढ्छ (जस्तै यो सामाग्री प्रयोग गरेर टाइल मा अधिलेखन seams रूपमा, हामी तल वर्णन)। grout यस प्रकार, सिमेन्ट तुलनामा धेरै महंगा, त्यसैले यो अक्सर यस्तो सपिङ्ग सेन्टर, पसल, उच्च यातायात संग क्षेत्रहरु, को लागि प्रयोग गरिन्छ सार्वजनिक भवन र यति मा। उत्पादन उद्देश्यका लागि परिसर लागि Grouting रूपमा लागू यस्तो। यो भन्ने तथ्यलाई विचार लायक छ epoxy grout एक उच्च चिपचिपाहट र चाँडै स्थिर छ। त्यसैले, काम तिनीहरूलाई एक होसियार आवश्यक र केही नियमहरू पालना गर्नुहोस्। को seams कसरी अधिलेखन गर्न टाइल grout यस्तै छ मा? यो हामी बताउन पर्छ के छ।
पहिले कसरी टाइल मा seams अधिलेखन गर्न, रबर पन्जा, respirator र चश्मा - सुरक्षा, श्वसन र आँखा सुरक्षा गियर हात लागि राखे। अर्को, एक रबर स्पाटुला प्रयोग गरेर सानो grout टाइल सतह मा, त्यसपछि समान रूप यसको विशेष फ्लोट वितरण राख्नुहोस्। मिश्रण टाइल सतहमा 30-40 ° कोण मा diagonally लागू गर्नुपर्छ। जहाँसम्म सकेसम्म जोइन्टहरूमा मा grout RUB गर्ने प्रयास गर्दा, तीन चार पटक बारेमा grater आवश्यकता सञ्चालन गर्छन्। जोडहरुको denser, राम्रो भरिएका हुन्छन्। कि पछि, diagonally खर्च र grater सही कोण पकड अतिरिक्त grout हटाउन। एक समय को लागि प्रतीक्षा र एक नम स्पन्जले (कपडा) संग चीनी माटो टाइल वा पत्थर सफाई सुरु गर्नुहोस्। यसलाई विशेष हालतमा निस्तब्धता लागि बिछाउने पछि प्रयोग गर्न सम्भव छ।
अब तपाईं कसरी टाइल मा seams अधिलेखन गर्न जान्दछन्, र तपाईं काम गर्न सक्छन् आफैलाई।
आवास को लागि ट्रेलर: को आयाम र फोटो
ठोस कसरी बनाउने
राम्रो कास्टिंग तल्ला आत्म-leveling यौगिकों
बाहिर घरहरू वार्मिंग। बाहिर बाट घर को थर्मल इन्सुलेशन लागि सामाग्री
आफ्नै हातमा इँटा को कौसी: चरण निर्देशनहरूको, रोचक विकल्प र सिफारिसहरू द्वारा चरण
भित्री सजावट लागि कृत्रिम ईटा
चीन: सुदृढ स्थितिदेखाउनुहोस् रवि
को राइम र कसरी यो संग आउन के हो?
"केटा-स्टार": छोटो सारांश। "द स्टार स्टार", वाइल्ड
विवरण र तयारी भोजन को विधिहरू: क्रीम सस मा chanterelles संग पास्ता
को Martingale प्रणाली के हो? Martingale सिस्टम: समीक्षा
विजेता Obinna: को प्रतिभाशाली नाइजेरियाली फुटबल खेलाडी बारेमा सबैभन्दा रोचक कुरा
एक बुनाइ बनाउन तरिका हो। घर विचार मा आय
हुलाक वस्तुहरू मा ठेगाना कसरी लेख्न
रोजगार अनुबंध र आफ्नो सामग्रीको प्रकार
मनके फूल कसरी बनाउने हामीलाई भन्नुहोस्
प्रकृति मा गणित: उदाहरणहरू
अभोकाडो आहार - slimmer हुन धेरै तरिका को एक